Maalinta: Ogast 26, 2018
Iskuduwidda Maareynta Mashruuca Taariikhda ee Istanbul
Metro Istanbul, oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul, ayaa duulimaadkeeda ku kordhisay 01.00 dhamaan khadadka sababta oo ah kulamada la ciyaari doono maanta iyo berri. Cinwaanka barta Twitter-ka ee Metro Istanbul ayaa ku dhawaaqday waxyaabaha soo socda: “Rakaabkeenna, 26 Agoosto [More ...]
Dugsiyo sare oo xirfadeed, Dugsi sare oo warshadeed, warshadaha Anatolian, Dugsiga Sare ee Farsamada, Dugsiga Sare ee Farsamada Anatolian iyo Dugsiga Sare ee Barnaamijyada badan; Korontada, Korontada-Korontada, Korontada, Wada xiriirka elektaroonigga, [More ...]
BTSO ayaa sheegay in dibadda laga dhoofiyo
aragti Turkey daahay muddo ah taas oo wakiillo ka socda dhaqaalaha dunida ganacsiga uu sii odoroso dhibtani ah BCCI, in September, ay sii wadi doonaan yiraadho buuxa barnaamijyada shisheeye. Wakaaladda Bandhigga Caalamiga ah ee BTSO iyo [More ...]
Duqa Magaalada Karaosmanoglu: Marka ugu horeysa Gawaarida ayaa bilaash ah sannadka koowaad
Midowga Dowladaha Hoose ee Turkiga (TDBB) iyo Duqa Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu ayaa soo kormeeray barxadda magaalada iyo baarkinka xiran ee ku yaal goobta dhismihii dowladdii hore. Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Dawladda Hoose [More ...]
Maanta taariikhda: 26 August August 1922 Yavuz Sultan Selim Bridge
Maanta Taariikhda 26 Agoosto 1922 Fariin telegram ah oo laga soo diray Behat Bey, Maareeyaha Guud ee Tareennada ee Re actedat Bey, kaasoo ahaa ku simaha Qareenka Nafiya bilowgii Dembiyada Weyn, “Dhammaan wixii qaranimada iyo allabari ah daqiiqaddan [More ...]